नेपाल आज | ओलीलाई धेरै शंका नगरौं, भविश्य उज्वल छ
ओलीलाई धेरै शंका नगरौं, भविश्य उज्वल छ
शनिबार, २३ चैत २०७५ गते प्रकाशित - नेपाल आज
अहिले एकथरी हल्ला छ– मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता खतरामा पर्दैछ । नेताहरु सबै लेण्डुप बन्न थाले । नेताहरुको अनुहार मात्र नेपाली, आत्मा बिदेशी । बिदेशीलाई नागरिकता बितरण, देशका ठूलाठूला परियोजना बिदेशीलाई हस्तान्तरण, माफिया अनुकुल नीति नियमको निर्माण आदी ।
यस्ता कुरा सुन्दासुन्दा स्वदेश तथा बिदेशमा रहेका नेपालीहरु वाक्क दिक्क भैसकेका छन् । साँच्चै आफनो प्यारो नेपाल बिदेशीको पञ्जामा पर्न थालेको त होइन ? देश नै नरहने हो कि ? यावत चिन्ता देशभक्त नेपालीमा परेको छ ।
तर, कहिलेकाहिं वास्तविकता एकतातर्फ र चर्चा अर्कोतर्फ हुने गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि कतिपय कुरा यस्तै भएका छन् । हामीमा कुनैपनि कुरालाई नकारात्मक ढंगले विश्लेषण गर्ने बानी बसिसकेकाले मुलुक नै तहसनहस हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको मात्र हो ।
वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका प्रा.डा. नृसिंह खत्रि भन्छन्,‘ राज्यलाई बिश्वास गरौं । उसको नीति, नियम, विधि र योजनालाई साथ दिउँ । देश बनाउने हो भने यो हामी सबैको कर्तव्य हो । अहिले सुविधाजनक बहुमतको सरकार छ, यसले थुप्रै राम्रा कामहरु गरेको छ । विकासको गोरेटो बनाएको छ, तर हामीले नकारात्मक कुराहरु मात्र देख्यौं । ’
नागरिकताका सवालमा पनि धेरै शंका गर्न जरुरी छैन । हो, अंगीकृत नागरिकता कुपनसरह बाँडे यसले राष्ट्रियतामाथि खतरा ल्याउँछ । यो कुरामा सरकारलाई झक्झक्याउनु पर्छ, तर बिदेशीलाई नागरिकता बाँड्न थाल्यो भन्ने हौवा पिटेर स्वदेशी सर्वसाधारणलाई नागरिकताबाट बिमुख पार्नु हुँदैन ।
प्राध्यापक खत्रि भन्छन्, ‘ संसद्मा कानुन निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेकाबेला गृह मन्त्रालयले नागरिकता बितरण गर भनेर सर्कुलर जारी गर्नु चाहिं अनुचित हो । कसैले रिट हाले सो सर्कुलर ठाडै खारेज हुन्छ । ’
यस्तै, न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा सिफारिस गरेका न्यायाधीशमाथि पनि प्रश्न उठाउन जरुरी छैन । न्याय परिषद्को संरचना नै राजनीतिक भएको तथा न्यायालय र राजनीतिबीच पनि अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएकाले थोरबहुत प्रभाव पर्नु स्वभाविक हो । सिफारिस भएका मध्ये कोही बेठिक भए ती संसदीय सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत हुने खत्रिको दाबी छ । त्यसो हुन नसकेपनि खराब काम गर्ने न्यायाधीशको मुल्याङ्कन आम जनताले पनि गर्ने भएकाले उसले कुनै न कुनै समय सजायको भागिदार हुनैपर्ने खत्रि बताउँछन् ।
‘नेपालमा सबै क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति भएपनि त्यसको उचित प्रयोग हुन सकेको छैन । यसमा राज्य चुकेको जस्तो देखिएपनि अहिले तीनलाई समेट्न धेरै प्रयास भएको छ । राम्रो र नराम्रो छुट्याउने परिपाटी सुरु भएको छ । असललाई पुरस्कार र खराबलाई दण्डको व्यवस्था हुन थालेको छ । यो त राम्रो सुरुवात हो नी, यस्तो कुरालाई प्रोत्साहित नगर्ने ?’ खत्रिको तर्क छ ।
उनी अघि भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको पार्टी नेकपाले राम्रा कामहरुको सुरुवात गरेकाले उनलाई साथ दिनुपर्छ । हामीले बिश्वास गर्नुपर्छ, तर अन्धविश्वास होइन । ’